Apr 19 မှာ Official ထွက်ရှိမယ့် MAC Cosmetics နဲ့ Patrickstarr တို့ collaboration လုပ်ထားတဲ့ Floral Realness 2018 collection | CosmeticMyanmar
Home » Article » Apr 19 မှာ Official ထွက်ရှိမယ့် MAC Cosmetics နဲ့ Patrickstarr တို့ collaboration လုပ်ထားတဲ့ Floral Realness 2018 collection
ဟယ်လို ဟယ်လို မိတ်ကပ်ချစ်သူလေးတို့အတွက် သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုလာပြီနော်။ Youtube, Instragram နဲ့ social media တွေမှာ followers သန်းချီပြီးရှိတဲ့ နာမည်ကြီးမိတ်ကပ်ပညာရှင် Patrick Starr က MAC Cosmetics နဲ့ ပေါင်းပြီးတော့ Floral collection လေးကို ထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။
Me so Fleek Face Kit ဆိုပြီး kit2ခု ထွက်ရှိထားပါတယ်။
အဲ့ဒီ kit ထဲမှာ eyeshadow , retro matte lipstick, duo blush, lip glass ( All full size4pcs ) ပါဝင်ပါတယ်။
ထုတ်ပိုးမှုပုံစံကလည်း နာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင် ဘူးလေးတွေပေါ်မှာ ချစ်စရာပန်းပွင့်ရောင်စုံလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားလို့ packaging နဲ့ တင်ကြွေဆင်းရတာပေါ့။
ကဲကဲ အစတွေပျိုးနေရတာစိတ်မရှည်တော့ဘူးထင်လို့ patrickstarr ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပုံလေးတွေနဲ့တကွ ဖွင့်ချပေးလိုက်ပြီနော်။
💐Dream Come True!💐 Ready for this FLORAL FANTASY REALNESS?! This is my 2nd collection with @maccosmetics !! Collection drops in store April 19! Global BABY! Check out my YouTube video! Link is in the bio! #macpatrickstarrr Creative Director @patrickstarrr
Me so fleek kit လေးကအရောင်ဆန်းလေးတွေကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက် တော့ အံကိုက်ပါပဲ။ သူရဲ့အရောင်တွေက ပွဲတက်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် look ဆန်းဆန်းလေးတွေပြင်ချင်တဲ့ အသဲတို့အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်။
💐Floral Realness! Thank you @maccosmetics for letting me have full control over my images and videos! We ordered SO MANY FLOWERS and I edited the editorial video for HOURS! So happy I was able to fully direct ALL visuals for this year long collab! I have the best team!Thank you MAC!! Creative Director and Executive Producer @patrickstarrr Assistant Producer @fabianzvon & @heyitspeterrr_ Photographer @brandonlundby Makeup @glamtechstevent Outfit @died4yoursins Nails @yvynails #macpatrickstarrr
Me so chic face kit လေးက Nude တစ်လိုင်းကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ အချစ်တို့အတွက် must buy ပါ။ MAC ကထုတ်ထားတာဆိုတော့ quality ကတော့ပြောပြစရာမလိုလောက်တော့ပါဘူး။ အရောင်လေးတွေကလည်း နေ့စဉ်သုံးလို့ရတဲ့ color လေးတွေဆိုတော့ဝယ်ထားပြီး မသုံးဖြစ်တာတွေလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့။
Apr 19 မှာ store တွေမှာ stock ထားတော့မယ့် ဒီ kit လေးတွေမထွက်ခင်တည်းက patrick က ရင်တွေအရမ်းခုန်နေတယ်ဆိုပြီး တင်ထားခဲ့သလို photoshooting တွေကိုလည်းအလန်းစားတွေရိုက်ကူးနေပါတယ်။
Kit တစ်ခုစီရဲ့ စျေးနှုန်းကတော့ $49.50 ဖြစ်ပါတယ်။ Online store တွေမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီမို့လို့ မြန်မြန်လေး ဝယ်ယူနိုင်ဖို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။